मुलुकमा अदृश्य शक्तिको चलखेल ! - Ratopati
मुलुकमा अदृश्य शक्तिको चलखेल !
- | राजकुमार थापा
हामी नेपाली जनता आफ्नै देशमा अन्योलमा छौ । अनेकन् अत्याचारको सामना गर्न बाध्य भएका छौं । सामान्य जनताहरुले जीवनयापन चलाउन धौधौ परेको अबस्था छ।
सन् १९८४ नोभेम्बर १ देखि अंग्रेजहरुले नेपालीसँग लडाईँको सुरूवात गरेपनि हामीले विजय प्राप्त गरेकै हो । तर, फेरि उनीहरुले लडाईको रणनीति परिबर्तन गरी इन्डिया कम्पनीमार्फत नेपालसँग सुगौली सन्धि गरेर नेपाल प्रवेश गरे ।
पछि तिनै तिनै अंग्रेजहरूको अप्रत्यक्ष साथ सहयोगमा बि.सं १९०३ सालमा जङ्ग बहादुर मार्फत कोत पर्व गराइ जाहनिया राणा शासनको सुरूवात् भयो र १०४ वर्ष सम्म राणा शासनलाई हरतरहको साथ सहयोग गरि नेपालको राजसंस्थालाई कमजोर पर्ने काम गरिएको थियो । अंग्रेज शासनको अन्त्य सँगै भारतले फेरि सन् १९५० मा अर्काे असमान सम्झौता गरेर नेपाल माथि गिद्धे दृष्टि राख्ने परम्पराको थालनी गर्याे।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसै क्रममा देशमा बिकासको मुल फुट्यो । तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट हरेक गाउ बस्तीमा भ्रमण भयो । जनताको राय विचार बुझ्ने काम भयो । देशमा आवश्यक कुराहरु जस्तै बिद्यालय,अस्पताल,बाटोघाटो,बैंकलगायतको निर्माण भयो । गाउ फर्क अभियान र भुमिसुधार हठबन्दी लागु भयो । हिमाल पहाड तराईका जनता एकाअपसमा मिलेर बस्न थाले । जनताहरुमा देश बिकासको अनुभुति हुन थाल्यो। राष्ट्र भक्तीमा जनताको मोह पनि सङसङै बिकास हुन थाल्यो ।
त्यसै बेला हो, गीत–कबिताहरुमा गीतकार तथा कबिहरुले राष्ट्र प्रेम झल्काउन थालेका । तर के गर्नु ! त्यसको केही समय नबित्दै बैरिहरुको आँखा लाग्यो । बिकास प्रेमी राजामा अनि षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने काम सुरु भयो । भारत लगायत अंग्रेजÞहरुले राजा महेन्द्रलाई मानसिक तनाब दिन सुरु गरे । पछि राजाको चितवनमा अबस्थित दियालो बङगलामा असमाहिक निधन भयो।
राजाको निधन हृदयघातका कारणले भयो भनी जनता माझ भनियो तर धेरै जनताले बिश्वास गरेनन् । त्यसका लागि राजाका सहयात्री गुरु योगी नरहरि नाथजी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि राजाको मृत्युको बारेमा शंका व्यक्त गर्नु भएको थियो । महेन्द्रको निधनसँगै बिकासका कामहरु प्रभावित भए ।
औलो निर्मुलन भनेर बि.स २०२० मा रेडक्रम नामको संस्थाको प्रवेश भयो देशमा औलो उन्मुलन पनि गर्यो। पछि त्यसकै आडमा अग्रेजहरुको प्रभाव विस्तार भयो । देशको हरेक प्रसासनिक कुराहरुमा चासो दिने र हस्तक्षेप गर्ने काम सुरु भयो । जनगणना देखि निर्वाचन सम्मको कुरामा आफ्नै हात लगाउँदै नेपालको कर्मचारी आफ्नै कर्मचारी जस्तो गरि निर्देशनमा काम गराउने काम भयो।
माओबादी जनयुद्ध कालमा मठ मन्दिर भत्काउने, मन्दिरमा बसेका पुजारीहरुलाई कुटपिट गर्ने, टुप्पी काट्ने जनै चुडाइदिने मन्दिरमा दिसा पिसाब गरिदिने , बरखी बसेका मानिसहरुलाई कुटपिट गर्ने र हत्या समेत गर्ने काम भयो । संस्कृत पाठसाला भत्काई दिने पुराना पुस्तकहरु जलाई दिने जस्ता जघन्य अपराध पनि भयो ।
यस्तै २०२८ सालमा शिक्षा नीति परिबर्तन गरियो यो नै सबै भन्दा ठुलो प्रहार भयो । शिक्षा माथी नेपाली जनतालाई आफ्नो वैदिक शिक्षाबाट बिस्तारै विदेशी शिक्षातर्फ आकर्षित गरियो । दरबारदेखि जनता माझ अङ्ग्रेजीको भुत सबार भयो। हुने खाने ठुलो परिवारकाहरु अमेरिका युरोप तिर पढ्न जाने लहडनै चल्यो ।
२०४६ सालमा पञ्चायत व्यबस्था ढालियो र बहुदलीय व्यबस्ता सुरु भयो । त्यसै दिन देखि नेपाली जनताको दुखका दिनहरु सुरु भयो । देशमा धेरै नेता भए । क्रिष्सियन मिसिनरीहरुको मिसन तिब्ररुपमा अगाडी लम्क्यो । आईएनजीओहरु च्याउ सरि खुल्न थाल्यो । त्यसकै आडमा स्वार्थ पूर्तिका लागि पैसाको खोलो बग्यो तर, गरीबीको अवस्था जस्ताको त्यस्तै थियो ।
व्यवस्था फेरिएसँगै परिस्थिति फेरिए । कयौं युवाहरु कुलतमा फस्दा अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । यो पनि अदृश्य मिसनकै कारणले भएको हो । ति मिसन देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा मानेको युवाको मेरुदण्ड भाँच्न सफल भएका छन् । भै बचेका युबाहरुलाई पनि बिदेश पलायन हुन बाध्य पारिएको छ ।
अदृश्य आक्रमण हामी साधारण जनताले बुझ्न सकेका छैनौं । अब पनि हामी बेलैमा सचेत भएनौं भने हाम्रा सन्ततीको भबिष्य थप डरलाग्दो बन्ने खतरा छ । त्यसैले नेपाली जनता बेलैमा सचेत बन्नु जरुरी छ ।
(यो थापाको निजि विचार हो )